China Power ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta Manufacturer - Quality Power ọdụ okpomọkụ ihe kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta
Ekwekọ akpụ stator okpomọkụ ihe mmetụta
A na-ejikarị nnukwu okpomọkụ na nrụgide arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji tụọ okpomọkụ nke stator nke nnukwu ndị na-enye ọkụ na ọkara. Dabere na agbakwunyere thermistor okpomọkụ e ji eme ihe mmewere maka moto, a na - eji teknụzụ na - egbochi ihe eji arụ ọrụ iji hazie ihe mkpuchi dị iche iche dị iche iche, yana teknụzụ patent nke etinyere nnukwu okpomọkụ na nrụgide dị elu na - eji maka otu oge.
Mgbawa ụdị stator okpomọkụ ihe mmetụta
Mgbawa-ụdị stator okpomọkụ ihe mmetụta (T2010Pt100-100-5-3200 / 01) nwere obere okpomọkụ ịrị elu na a pụrụ ịdabere na okpomọkụ mmesho. Ihe mmetụta okpomọkụ na-agbatị ruo ọtụtụ ogologo nke ahụ na-achọpụta iji nye nkezi ọgụgụ ọgụgụ okpomọkụ na mpaghara mmụba okpomọkụ. Nke a na - egbochi ihe egwu na ihe mmetụta ọnọdụ uche na - efu ebe dị ọkụ mpaghara.
Stator asọfe RTD
Stator winding RTD (TW2010Pt100-100-2-3104 / 00F200 / X2) nwere obere okpomọkụ ịrị elu na a pụrụ ịdabere na okpomọkụ mmesho. Ihe mmetụta okpomọkụ na-agbatị ruo ọtụtụ ogologo nke ahụ na-achọpụta iji nye nkezi ọgụgụ ọgụgụ okpomọkụ na mpaghara mmụba okpomọkụ. Nke a na - egbochi ihe egwu na ihe mmetụta ọnọdụ uche na - efu ebe dị ọkụ mpaghara.
Ezubere nkwụnye nkwụnye ahaziri iche maka njikọ ọsọ ọsọ, mmegharị dị mma, ngwa ngwa ngwa nke eriri mgbaàmà sensọ nke jenerato na melite arụmọrụ ọrụ.
ngwa ngwa njikọ okpomọkụ ihe mmetụta
Ndenye njikọ nke Testeck okpomọkụ ihe mmetụta nwere ike n'ụzọ dị irè iguzogide vibration na mmetụta na gbochie disconnection mere site Anam Udeme USB.
gbawara n'etiti okpukpu igbe okpomọkụ ihe mmetụta
Testeck nkwụsị igbe ihe owuwu okpomọkụ ihe mmetụta F12Pt100-200-3220 / F04 nwere ike disassembled enweghị mmechi, na ihe mmetụta nwere ike disassembled ngwa ngwa. A na-eji ihe nkedo ihe nkedo ihe nketa eme ihe na ihe nyocha nke ikuku ikuku, pipeline mmiri na mmanu mmanu.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.